HIM | Health in Myanmar » 2011 » February
Doctor interviewed about work in the Wa region
It would have been nice to hearalittle bit more about HIV prevention in the Wa region. VC(C)T is not prevention.
HIV/AIDS လူနာတွေမှာဆိုရင် ရောဂါအဆင့်မြင့် လာတာနဲ့အမျှ သူတို့ရဲ့ “CD4 Count” ဟာ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာတတ်ပါတယ်။ “CD4 Count” မြင့်တက် လာတာနဲ့ အတူရောဂါဝေဒနာ သက်သာ၊ တိုးတက် လာနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲ ကင်ဆာရောဂါလို့ ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကလပ်စည်း တွေ၊ ဆဲလ်တွေ၊ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ၊အဆမတန် ပုံမှန်မဟုတ် တိုးပွားလာတာ (ဒါကြောင့် မြန်မာ တိုင်းရင်းဆေး ဆရာတွေက ‘မြစ်ပွားနာ’လို့ ‘ကင်ဆာ' ရောဂါကို ခေါ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
IPS finds the Global Fund is back
Since IPS articles are syndicated and bits and pieces of them are often quoted in other news stories, it is disappointing that this one was published onaSaturday.
အေအာတီဆေးဝါး လိုအပ်နေသည့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ
သာကေတမြို့နယ် အထူးကု ဆေးရုံ(သာကေတ)ရှိ အေအာတီ ဆေးဝါးလိုအပ်နေသည့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ကူးစက်ခံရသူများအား International Union Against TB and Lung Diseases (IUATLD) အဖွဲ့မှ ဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Country report on children and HIV does not include an estimate of the number of children living with HIV
Here isacountry report on children and HIV foraregional meeting in Hanoi five years ago. Censorship is clear as in this country report there is NO estimate of the number of children living with HIV or the number of orphans. The new head of HIV for UNICEF still hasalot of work to do.
SW group representatives going to the ICAAP?
The [him] moderator has received this request from Tish Norris at the Scarlet Alliance. Please feel free to contact her.
တကယ်က အမေအမတွေနေတဲ့အိမ်နဲ့ ကျမရဲ့တဲ လေးက ၀ါးတစ်ပြန်လောက်ဘဲ ဝေးတာပါ။ ကျမသမီးက သူခေါ်တာ ထူးမဲ့သူမရှိ၊ မအေကိုလဲ စိုးရိမ်ပုံရ တယ်။ မျက်ရည်တွေကျလာပြီး သူဆဲတတ်သလို အကုန်ဆဲပြီး“ငါ့အမေသေတော့မှာ မလာကြဘူးလား”ဆြိုပီးမိုးရေထဲထွက်၊အသားကုန်အော်ငိုတော့မှ လူကြီးတွေ ရောက်လာပြီး မီးမွှေး၊ ရေနွေးတိုက်၊ ဆေးတိုက်လုပ်ကြတာ။ကျမ အဖျားကျသွားတော့ သမီးရဲ့မျက်နှာလေးကို စိုက်ကြည့်ပြီး ၀မ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်သွားခဲ့မိတယ်။
You can bid on the supply of CD4 cell count equipment
Here is the invitation to bid.
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: facts for life
ဟိုးယခင်ကတော့ Living Together ဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အတော်လေး စိမ်းနေခဲ့ပါတယ် ။ အခု တော့ လည်း ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ တီးတိုးပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားလို့လာခဲ့ပါပြီ ။ အနောက်တိုင်း နိုင်ငံတွေမှာLiving together အပေါ် ထောက်ခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့သလို ရှုံ့ချတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကဲဒါဆို ကျွန်တော်တို့ကရော Living together အပေါ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ ???? ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက လည်း သဘော တူတယ် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကလည်း အိုကေတယ် ဆိုရင် ဘာမှဝေဖန်စရာ ၊ မှတ်ချက်ချစရာမရှိပါဘူး ။ ဒီနေရာမှာ အပိုင်း ၂ပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ ။
Why isn't thisaP5 post?